Ọrụ ntụgharị CNC - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Omenala nkenke CNC agbanye Lathe Service-OEM / ODM China CNC agbanye Parts Manufacturer
Ouzhan bụ ọkachamara na ahụmahụ ziri ezi Ọrụ ntụgharị CNC soplaya, emeputa, ozu ahia na ekspootu na China, e ọkachamara na-enye ọkachamara OEM / ODM CNC ọrụ ntụgharị n'ihi na elu-edu ma ọnụ ala CNC mbịne akụkụ, CNC lathe akụkụma ọ bụ nnukwu nkenke machined mmiri na elu igwe na ọkà ntuziaka ọrụ. Dị ka akụkụ aka, akụkụ efere, akụkụ osisi, washers, bolts, pipe fittings, wdg.
Anyị dị elu CNC agbanyeebe a na-emebe ihe na ọrụ ọdịnala na-akwado ụdị ihe dị iche iche, gụnyere ọla kọpa, igwe anaghị agba, carbon steel, aluminom, titanium na plastik. Anyị ga-edozi usoro mbugharị kachasị dabara adaba, na-agbaso ihe niile ị chọrọ, anyị nwere ike belata ọnụ ahịa gị ruo oke oge. Omenala anyiỌrụ igwe CNC mgbe niile hụ na ndị ahịa anyị natara ogo kachasị elu CNC gbanwere akụkụ na ọrụ kachasị echebara echiche.
Ouzhan nkenke CNC agbanye ikike na atụmatụ:
OuZhan nwere ikike ịnye ọnụahịa dị irè CNC na-atụgharị ọrụ lathe na ngwaahịa ndị dị oke mkpa maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ.
- Nkwado obere, ọkara na nnukwu olu ogbe mmepụta
- Otutu prototyping na ọgwụgwụ na-eji n'ichepụta
- Ọdịdị dị elu dị elu, nrụpụta ọsọ ọsọ na ntụkwasị obi dị elu
- Wide nke nhọrọ ọla na plastik
- Nrụpụta siri ike na oge nnyefe ọsọ ọsọ
- Chọrọ agwụ na uko tolerances dị
Ihe kpatara ị ga - eji họrọ Ouzhan CNC Turning Services
1. Hi-Tech Manufacturing Akụrụngwa
Anyị isi n'ichepụta ngwaọrụ na-imported si Switzerland na Japan, nke nwere ike inye ndị ahịa na ọnụ ala CNC mbịne ahịa.
Na mgbakwunye na ịtụgharị, anyị bụ ọkachamara na igwe, lathing, mkpọpu ala, ọrụ ntụgharị CNC na igwe ndegharị, yabụ ị nwere ike ịnweta nnukwu nhọrọ nke akụkụ ndị ọrụ CNC si n'aka ndị otu anyị tụkwasịrị obi.
Anyị nwere ndị injinia 10 na ụlọ ọrụ R&D anyị, ha niile bụ ndị dọkịta ma ọ bụ ndị prọfesọ si Mahadum Sayensị na Teknụzụ nke China. Anyị nwere ike ịnye ọkachamara ọkachamara CNC na ọrụ ọrụ injinia CNC.
Anyị nwere ọkachamara àgwà nnyocha pesonel na equipments, dị ka mba ụkpụrụ gị ngwaahịa na-anwale, na inye a zuru ezu ule akụkọ maka ahịa 'CNC machining akụkụ.
Ahaziri nha na shapes dị. Mmadụ Bịa na-eso gị 2D ma ọ bụ 3D Eserese nke gị CNC machining akụkụ na anyị, ka na-arụ ọrụ ọnụ na-eme ka ndụ ihe okike.
Ouzhan CNC igwe ndepụta
Ogwe-egwe ọka 5-axis
Ogwe igwe igwe 4-axis
Ogwe igwe igwe axis 3-axis
Keyway broaching igwe
Ebe akara laser
Gịnị Bụ CNC agbanye Service & Olee otú CNC agbanye Ọrụ
CNC na-atụgharịna-arụpụta akụkụ nwere njirimara cylindrical site na iwepu ihe site na igwe ma ọ bụ nkedo plastik na-eji ndị na-egbutu ihe, ihe ndị dị na etiti ma ọ bụ ngwá ọrụ dị ndụ. CNC Turning na-eji igwe eji kọmputa arụpụta ngwaahịa ikpeazụ. Usoro a na-eji otu ihe eji egbutu oge iji tinye ihe yiri ya ka ịkpụ. A na-agbanwe ihe ndị a na-agbanwe agbanwe na ngwa ọrụ ahụ na-agagharị iji mepụta ọnụọgụ na oke nha. A na-eji ya mepụta okirikiri ma ọ bụ tubularshares site na nnukwu mpempe akwụkwọ. Ọ bụ usoro akpaaka na ọsọ ọsọ nwere ike ịbụ mmezi maka izi ezi karịa karịa iji aka gbanye lathe.
N'ihe banyere usoro ntụgharị CNC, a na-eme usoro mmepụta ihe na CNC lathe ma ọ bụ na-atụgharị n'etiti. Tupu ịcha, G-koodu na igwe ntụgharị ga-akwadebe, wee mezie oghere oghere nke ngwaahịa na ngwongwo nke spindle, mkpọtụ na-ejide mpempe ahụ mgbe spindle na-agbagharị. Site na spindle na-agba ọsọ ọsọ, onye CNC na-atụgharị ihe na-anọ otu ebe ga-agagharị n'okporo ụzọ nke yiri nke ntụgharị ma wepu ihe dị oke, belata dayameta nke mgbochi ahụ, kọwaa akụkụ ya ma mepụta ezigbo mma, ka nweta omenala ikpeazụ CNC gbanwere akụkụ na nkọwapụta chọrọ.
Ngwongwo CNC - Ihe eji eme ihe maka CNC lathes
Nwayọọ, Alloy & Ngwá ọrụ ígwè
Ike mesikwuru plastic
Ndị ọzọ ihe onwunwe
Nchara nchara 1018
Nchara nchara 1045
Ọla kọpa C101
Obere nchara A36
Naịlọn 30% GF
Ọla kọpa C110
Alloy nchara 4140
Titanium ọkwa 1
Alloy nchara 4340
Acetal (POM-C) Ọbara
Titanium ọkwa 2
Ngwá ọrụ ígwè O1
Ngwá ọrụ ígwè A2
Ngwá ọrụ ígwè A3
Ngwá ọrụ ígwè D2
Ngwá ọrụ ígwè S7
Ngwá ọrụ ígwè H13
Ngwa nke CNC Turning Services and Parts
Ouzhan CNC Milling Mkpa Emechara